साढे १३ करोडको लागतमा सडक निर्माण सुरु - Everest Dainik - News from Nepal
इलाम, मङ्सिर १९ । इलामका उत्तर पूर्वी गाविसको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हु“दै गएको नया“बजार जोड्ने पक्की सडक निर्माण सुरु भएको छ । फिक्कलबाट नया“बजारसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु भएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् ।
उन्नति समावेशी परियोजनाअन्तर्गत रु १३ करोड ६६ लाखको लागतमा हिउँद बर्खा नै मोटर चल्न सक्ने गरी सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरु भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस अब सडक तथा सार्वजनिक ठाउँमा सुते कारवाही !
फिक्कलको बरबोटेबाट १९ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रका जोगमाई, गोर्खे, नया“बजार, सोयाङ, प्याङ, नामसालिङ र जमुनासम्मका बासिन्दालाई स्थानीय कृषि उपज बिक्री गर्नस“गै उपभोग्य सामग्री खरिद र आउजाउमा सहज हुने भएको छ ।
सडक स्तरोन्नतिको उद्घाटन गर्दै इलामका सभासद् केशव थापाले सडकलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने बनाउन नियमित अनुगमन गर्न स्थानीयवासीलाई सुझाव दिनुभयो । पन्ध्र महिनामा काम सम्पन्न हुने यस सडकको चौडाइ नालीसहित ६ दशमलव २५ मिटरको रहने उक्त सडक नागार्जुन कन्स्ट्र«क्सन कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।
याे पनि पढ्नुस डा. केसीको उपचारका लागि दोस्रो चिकित्सक टोली इलामतर्फ
नया“बजारलाई नै सदरमुकामस“ग जोड्न २१ किमी लामो अर्को सडक पनि निर्माणाधीन छ । माइखोलासम्म निर्माण सकिएको सडकको सोयाङखण्डमा काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै माइखोलामा पुल निर्माण कार्य पनि थालिएको छ । तपस्वी बालागुरुले २०११ सालमा बस्ती बसाएको नया“बजारमा उहा“कै नेतृत्वमा २०१२ साल चैतमा भारतको मानेभञ्ज्याङबाट मोटर ल्याइएको भए पनि त्यसयता यहा“का बासिन्दाले सडकको दूरावस्था सह“दै आएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस गल्छी–त्रिशूली सडक दैनिक आठ घण्टा बन्द
अलैँची, अदुवा, आलु, सागसब्जीलगायत विभिन्न कृषि बालीको व्यावसायिक खेती हुने यस क्षेत्रमा सडक यातयातको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा बजारसम्म पु¥याउन कठिन थियो । गाविस अध्यक्ष गोकुल सञ्जेलले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी विकासको काममा अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे। रासस
ट्याग्स: ilam, sadak